▷ 🎮 Xeeladaha Kooxda 【Dib u eegis oo soo dejiso ✅】 - 【Isbarbardhigga】 2022
🎮 Xeeladaha Kooxda 【Dib u eegis oo soo deji ✅】
Fogaan la jaanqaadi kara Beddelka / Beddelka Lite / Beddelka OLED, Xakamaynta Bluetooth Pro ee Wireless.
Tabaha Gears waxay si taxadar leh dib u abuurtaa xiisaha fowdada ah ee Gears of War toogashada sida istaraatiijiyad ku salaysan.
Xusuusin tifaftiraha: Hoos waxaa ah fikradahayaga ku saabsan sida Xeeladaha Gears ay ugu shaqeeyaan Xbox Series X, sidoo kale ka socda dib u eegista Tabaha Gears Mike Epstein. Waxa kale oo aad akhrin kartaa dib u eegistayada Taxanaha X oo dhamaystiran si aad u hesho dulmar faahfaahsan oo ku saabsan console-ka xiga. Sii wad fasaxa kadib dib u eegista Tabaha Gears asalka ah.
Markii la siidaayay Xbox Series X iyo S, Microsoft waxay sii deysay Xbox One iyo Xbox Series X / S ee Tabaha Gears. Ciyaaraha istiraatijiyadeed sida Tabaha Gears si toos ah uguma turjumaan consoles-yada, halkaas oo kontaroolada gamepad-ka wanaagsan ay tahay lama huraan, laakiin Tabaha Gears ayaa ka dhigaysa kor u qaadista consoles qaab ahaan. Markaad isticmaalayso joystick analooga ah si aad u dhaqaajiso cursorku had iyo jeer wuu ka gaabiyaa isticmaalka jiirka, gameplay-ku-salaysan milicsiga waxba lumin turjumaada.
Guji si aad codka uga saarto
21-ka ciyaar ee PC-ga ugu fiican ee bilaashka ah ee la ciyaaro
Khabiirka Hubka Ayaa Ka Jawaabay Wicista Waajibka: Vanguard Field Hubka
11 Talooyin Horumarineed oo Halo Infinite ah oo aadan ogeyn
Halo Infinite Fracture: Tenrai Event ayaa ciyaarta ugu sareysa 3 ku dhejisay Steam | LaComparación News
Ciyaaro badan oo Xbox Game Pass ah waa in la lahaado ciyaaro
Ololaha Iskaashatada Halo Infinite: Sababta aad u Sugayso | LaComparación News
Ibliis May Oohin 5 - Steam Deck Gameplay
Fortnite cutubka 2 Trailer kama dambaysta ah
Forza Horizon iyo ciyaaraha motorsport darajada
Goobta dagaalka 2042 Muuqaalka Muuqaalka
Dib u eegis joogto ah oo ku saabsan Halo Infinite multiplayer
Dagaalka Jidka V - Cusboonaysiinta Dhicis
La wadaag, qaybi
Cabbirka: 640 × 360 480 × 270
Waxay ka bilaabataa:
Ma doonaysaa in aan ku xasuusano setinkan qalabkaaga oo dhan?
Is diwaangeli ama gal hadda!
Isticmaal browserka taageera html5 fiidyaha si aad u daawato fiidyaha. Fiidiyowgaan wuxuu leeyahay qaab fayl aan sax ahayn. 00:00:00
Ka warbixi dhibaatada Waan ka xunnahay, laakiin ma geli kartid macluumaadkan. Geli taariikhda dhalashadaada si aad tan u aragto
Markaad gujiso 'geli', waxaad ogolaatay
Shuruudaha isticmaalka iyo siyaasadda khaaska ah
Hadda Ciyaarta: Gears Tactics Video Review
Sida ciyaaro badan oo isdhaafsi ah ilaa hadda, Tabaha Gears wuxuu helayaa faa'iidooyin farsamo oo la miisaami karo, taas oo ku xidhan konsoolka aad ku ciyaarto. Xbox One X, waxaad dooran kartaa inaad ku ciyaarto 4K at 30fps ama 1440p at 60fps. Xbox Series X, ciyaartu waxay ku socotaa 4K xallinta iyo 60fps. Ciyaar taatiko ahaan iyadoo la adeegsanayo kamarad-qaabeedka RTS, daacadnimada sare ma laha saameyn aad u badan sida ciyaaraha kale halkaasoo aad ku arki karto faahfaahin kasta oo dhow. Weli, markaad fursad hesho, waxaad arki kartaa in adduunka, gaar ahaan jilayaasha, ay u muuqdaan kuwo aad u fiiqan.
Marka ciyaarta lagu sii daayo konsole, waxaa jira cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay dhammaan aaladaha, oo ay ku jiraan PC. Ku dar nooca ololaha ee la cusboonaysiiyay, oo ay ku jiraan dabeecad cusub, cadaw, iyo booli kale. Ololaha la cusboonaysiiyay, Jack, Robot-ka albaabka-jabida ee qarsoon ee taxanaha Gears of War, ayaa ku biiray kooxdaada. Marka la helo, Jack wuxuu u adeegaa sidii xubinta shanaad ee loo baahan yahay ee kooxda hawl kasta, iyadoo lagu saleynayo saddexda saacadood ee ugu horreeya ololaha cusub. Ma weerari kartid, laakiin Jack wuxuu bixiyaa xirfado taageero weerar iyo difaac ah oo kala duwan oo la beddeli karo si kooxdaada looga dhigo mid waxtar leh oo hufan. Si loo dheellitiro saamaynta kooxdaadu ku yeelanayso xubin dheeri ah oo dhinacooda ah, hawlo badan ayaa dib loo habeeyey, iyadoo lagu daray cadowyo dheeraad ah. Waxa kale oo jira cadaw gaar ah oo Deviant-class ah kuwaas oo awood siinaya xulafadooda u dhow, sida Jack uu awood u siiyo kooxdaada.
Jack iyo cadawgii aragti ahaan leexday waxay soo kordhiyeen lakab cusub oo diidmo ah. Isticmaalka waxtarka leh ee Jack wuxuu u baahan yahay iskudubarid taxaddar leh; Marka aad si fiican u leexato, waxaad nadiifin kartaa dariiqa aad ku dili karto cadaw badan oo aad u dhisi karto xitaa dardar dheeraad ah. Sidoo kale, cadawga khiyaanada leh waxay kugu qasbi karaan inaad bedesho mudnaanta dagaalka, maadaama aysan ahayn kuwa awood badan, laakiin sidoo kale waxay ka dhigaan dhammaan cadawgaaga kuwo aad u dilaa ah. Isla mar ahaantaana, dhammaan walxaha dheeraadka ah, dhaqdhaqaaqyo badan oo la sameeyo, cadaw badan oo la dagaallama, waxay sameeyaan heer kasta oo ka sii dheer inta loo baahan yahay. Bilawga ciyaar cusub, waxaad dooran kartaa inaad ku ciyaarto ololaha Jacked oo leh astaamahan cusub ama olole caadi ah. Markaan sii wado ka shaqeynta ololaha cusub, waxaan dhihi lahaa asalku waa khibrad adag oo ku qanacsan. Taasi waxay tidhi, haddii aad dhammaystirtay Sheekada Tabaha Gears oo aad rabto farxad cusub, dib ula ciyaarista ololaha cadawga Jack iyo Deviant aad ayay uga xiiso badan tahay kaliya dhammaystirka hawlgallada ruug-caddaaga ah ee si aan kala sooc lahayn loo soo saaray. - Mike Epstein, Noofambar 5, 2020. Dib u eegista asalka ah, oo markii ugu horreysay la daabacay Abriil 2020, ayaa ku socota hoos.
Gears of War, sida taxana ah, ayaa had iyo jeer u baahday qorshayn xeeladeed. Fahamka sida loo akhriyo goobta dagaalka si aad u hesho dabool habboon iyo dariiq aad uga fogaato qofka kaa soo horjeeda ayaa lama huraan u ah sida aad ugu kalsoon tahay Lancer Assault Rifle. Weli, waxa la yaab leh intee in le'eg oo taxane ah loo tarjumo xeelad ku salaysan RPG. Tabaha Gears waxay qabtaa dhiigga, tamarta fowdada ah ee roller coasters ay dhaliyaan toogashada, xitaa iyadoo diiradda la saarayo ciyaarista qalabka ilaa dayactirka mishiinka.
Farsamo ahaan, Tactics waa horudhac sida ay u dhacdo ka hor dhacdooyinka taxanaha asalka ah, laakiin runtii waxay dareemeysaa sidii sheeko foosto dheerad ah oo la tuuray. Iyadoo xidhiidhka guud ee Gears saga uu badan yahay, gaar ahaan Gears 5, oo uu hoggaamiyo Gabe Diaz, Kait aabbihiis, sheekada Tactics Gears waa mid toos ah oo inta badan ka soocday ganacsiga weyn.
Marka sida qisadu u sii dhacayso gadaasha, Tabaha Gears waxay si xariifnimo leh u habaysaa istiraatijiyadda casriga ah ee RPG, abuurista sheekooyin ku habboon qaab-dhismeedka Gears. Dhammaan makaanikada XCOM-ku dhiirigalisay ayaa jira: qodobbada ficil ee loo isticmaali karo in lagu dhaqaaqo ama la weeraro, dabool buuxa iyo mid dhexdhexaad ah, meelaynta 'feejignaanta' difaaca. Haddii aad waligaa ka fikirtay ereyga "ciyaaraha xeeladaha," faseexnimada ayaa kugu habboon.
Waxa kale oo ay si cajiib ah u baran doontaa taageerayaasha Gears. Inta badan makaanikada taxanaha ah iyo nidaamyada ayaa markooda soo muuqda, badankooduna si fiican ayey ugu habboon yihiin. In cadawga la rido (kadibna la fuliyo) waxay noqotaa mid muhiim ah maadaama ay siinayso kooxihiina waxqabadyo dheeri ah. Ku ordaynta silsiladda Lancer waa hab gardaro ah oo lagula dagaallamo jidkaaga cadawga, laakiin waa haddii aad la qabsan karto iyaga adoon tooganaynin ilaalo. Kaliya maahan makaanikada iyo horumarka stylistic ee taxanaha Gears waxay macno samaynayaan goob-wareejin ku salaysan, laakiin waxaad sidoo kale qorshayn kartaa hareeraheeda.
Sidoo kale, ku dhawaad ​​dhammaan noocyada cadawga ayaa laga soo dhoofiyaa taxanaha toogashada, oo leh tirokoobyo iyo astaamo u turjumaya aqoonsigooda ficil-waqtiga-dhabta ah qaab istaroot-ku-saleysan oo dheeraad ah. Walaacyadu had iyo jeer wejigaaga ayay ka soo galaan, iyaga oo abuuraya khalkhal halis ah. Qaar ka mid ah cadawga aadka u horumaray, sida Boomers-ka Ilmaha, ayaa soo dayn doona hubkooda xoogga badan ee qarxa, taasoo ku siinaysa fursad aad uga soo jeedsato xoogga weyn ee cadowga.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, nidaamyada Gears-ka ayaa isku dhaca fikradaha la xaqiijiyay ee XCOM-la mid ah, iyaga oo ka dhigaya kuwo aan loo baahnayn. Tusaale ahaan, waxaad dhisi kartaa koox ka kooban in ka badan 20 Gears iyada oo loo marayo hawlgallo sheeko, laakiin maadaama hawlgallo badani ay kaa rabaan inaad isticmaasho jilayaasha yar yar ee sheekada ugu weyn, Gabe Diaz iyo kooxdiisa, marar dhif ah ayaad isticmaashaa wax ka badan dhowr waxyaalood oo kale. iyo kaliya marka jilayaasha aad jeceshahay la xaddido.
Marka ay labada aqoonsi midoobaan, waxa aad helaysaa sheekooyin u eg socodka iyo xoojinta fagaarayaasha dagaalka ee Gears shooters, oo haddana u ciyaara hab la xakameeyey oo la isku halleyn karo. Warqad ahaan, kooxdiisii ​​caadiga ahayd ee afarta Gears ah ayaa weli ka tiro badan oo hubaysan. Mowjad kasta oo cadaw ah waxa ay xambaarsan tahay xawli gaar ah, taas oo dhalinaysa shaki ku saabsan in aad haysato fursad aad ku noolaato iyo in kale. Markaad dhex wareegeyso tuulooyinka laga tagay iyo warshadaha laga tagay ee qaababka iyo cabbirka kala duwan, waxaad u guuri doontaa meel ilaa meel, adigoo isku dayaya inaad kooxdaada geliso booska ugu fiican ee suurtogalka ah si aad u qaadato wax kasta oo ku wareegsan. Sida Gears, in kasta oo aad isla markiiba la kulmi karto wax kasta oo aad la kulanto, had iyo jeer waxaa jira mowjad kale oo xoojin ah ama dalool degdeg ah oo cusub oo soo muuqda oo soo saara cadawga gadaashiisa dambe.
In kasta oo xaaladdu aanay waligeed faa'iido kuu yeelanayn, haddana had iyo jeer waxaa jira xal laga gaaro khatarta aad la kulanto. Haddii aad dooratid inaad qodo oo aad ka diyaargarowdo booska difaaca ama aad ka takhalusto guutada Ayaxa, waa inaad isticmaashaa dareenkaaga istaraatiijiga ah si firfircoon, isku dhafka dhaqdhaqaaqa iyo weerarrada kooxdaada habka saxda ah, sida ugu waxtarka badan iyo adkeysi ee suurtogalka ah. Dabeecad kastaa waxa uu "dhaqdhaqaaqi karaa" ( dhaqaaqi karaa, toogan karaa, ama isticmaali karaa awood gaar ah oo fasalkiisa ah) saddex jeer wareeggiiba. Waxaa intaa dheer, faa'iidooyinka iyo qalabka gaarka ah waxay inta badan ku siinayaan fursado badan si aad u hesho caafimaad ama dhaqdhaqaaq dheeraad ah. Xitaa marka aad dareento inaad gees ku jirto, waxaa had iyo jeer jira dhaqdhaqaaq ku siin doona fursad yar oo aad wax ku qabato si aad u rogto qulqulka, furto howlgalka, oo aad u bedesho dhaqdhaqaaqa. Marka taasi shaqeyso, oo tallaal taxaddar leh uu isu beddelo wareeg 20-wareeg ah, waxay dareemeysaa inaad ciyaareysay mid ka mid ah xeeladaha roobka falcelinta ee Marcus Fenix ​​​​uu u muuqdo inuu ka soo baxo Gears kasta.
Marka ay shaqeyso, oo tallaal taxaddar leh uu isu beddelo wareeg 20-wareeg ah, waxa ay dareemeysaa in aad ciyaartay mid ka mid ah kuwan...
Soo deji Xeeladaha Kooxda
Ragga ugu BESTKEE Suunka Xeeladaha 1.5 Inj ee Duty culus, Suunka Milatari ee Naylon oo leh bir si degdeg ah loo sii daayo...